Inja yaseGoberian: The Ultimate Golden Retriever Husky Mix Breed Guide - Izinhlobo
Inja yaseGoberian: The Ultimate Golden Retriever Husky Mix Breed Guide
IGoberian igama lohlobo lweGolden Retriever Husky Mix.
Ngakho-ke ufuna uhlobo olunalo ukuluma kancane kune-Golden Retriever emnandi? Mhlawumbe okuthile okujabulisa kakhulu, njengoHusky? Noma kunjalo uyinja enobungane futhi enobungani?
IGoberian, nabazali babo beGolden Retriever kanye nabazali baseSiberia Husky, kungaba ngumdlalo ophelele. Izinhlobo ezimbili ezidumile bahlangane ndawonye ukukhiqiza i-canine ethandekayo, kepha enobudlova, yezemidlalo.
Lokhu kuhlanganiswa kunengubo ekhanyayo ekhanyayo yegolide, enezindlebe ze-floppy, amehlo aluhlaza okwesibhakabhaka futhi ifinyelela cishe amasentimitha angama-24 ukuphakama. Umhlahlandlela womnikazi wethu uzokuthatha ngezidingo zabo zobuntu, ubumnene nokunakekelwa.
Imininingwane yeGoberian & Isifinyezo
Inhloso Umngane Womndeni
Ifanele i- Imindeni Enamandla
Usayizi Abesilisa bafinyelela ku-24 ”ukuphakama nabesifazane kufika ku-22”
Isisindo Abesilisa banesisindo esiphakathi kwamakhilogremu angama-45 kuye kwangama-80. Abesifazane banesisindo esisuka ku-35 kuye ku-70 lbs
Ukuhluka Kwemibala Igolide elinoboya obumnyama noma obukhanyayo
Isimo Kuyaphuma, kuthembekile, kuhlakaniphile, kuyazethemba, futhi kuyasebenza kakhulu
Ukuzivocavoca Nsuku Zonke Okuphakeme - imizuzu engama-60 ngosuku lokuhamba nokugijima kuhlanganiswe nesikhathi sokudlala
Amaleveli Womsebenzi Okulingene
Ukusetshenziswa Kokudla Kwansuku zonke Izinkomishi ezimbili kuya kwezintathu zekhwalithi ephezulu eyomile ngosuku
Izinkinga Ezaziwayo Zempilo Izinkinga zedysplasia nezamehlo
Ukubhekwa Kwezinja ZaseGoberian
I-Golden Retriever Husky Mix Ubuntu nokuziphatha
Ungayinakekela Kanjani iGoberian
Idla malini i-Golden Retriever Husky?
Ukuzivocavoca ngeGold Retriever Husky
Ukuqeqesha le Nja
Ukubukeka nokuzilungisa kweGoberian
IHalf Golden Retriever kanye nohhafu waseSiberia Husky, waseGoberian angaba yinjabulo ephelele kuwe.
Ukuhlanganisa lezi zinhlobo ezimbili ezihlakaniphile kukhiqiza umlingani oqotho ngokwedlulele futhi ophumayo kuwe nomndeni wakho.
Inhloso yokuzalanisa iGolden Retriever ngeHusky yaseSiberia kwakuwukuthuthukisa inja ehlakaniphe kakhulu, enokuzethemba kepha ethanda umndeni.
Lolu hlobo lwenja yomklami lwaqala ukuvela ekuqaleni kwawo-2000, futhi kusukela lapho kuye kwanda ukuthandwa .
Imfucumfucu yale nja yomklami iphakathi kwezine kuya kweziyisithupha, inenani elijwayelekile lentengo elilodwa eliphakathi kuka- $ 250 no- $ 1500 USD.
Njengoba lokhu kunguhlobo oluxubekile, umdlwane ngamunye kudoti ungaba nezici zawo ezihlukile, ukubukeka nobumnene. I-One Golden Retriever Husky Mix Puppy ingahle ibe yigolide enamehlo ansundu noma ama-hazel ngenkathi enye ingase ibe nalawo mahlo ahlaza okwesibhakabhaka ahlabayo ayintandokazi edume kubo bonke abathandi bakaHusky.
Usayizi Ogcwele Ngokugcwele
IGolden Retriever Husky Mix iyinhlobo yosayizi ophakathi nendawo ukuya kobukhulu. Abesilisa nabesifazane baseGoberiya bahluka kancane maqondana nesisindo nokuphakama kwabo:
Indoda ingakhula ize ifike kumakhilogremu angama-80 futhi izoma kuma-intshi angama-24 ngokwesilinganiso.
Uma kuqhathaniswa, owesifazane angafinyelela cishe kumakhilogremu angama-70 njengomuntu omdala futhi uzoma kancane abe mfushane ngamasentimitha angama-22 aze abune.
Owesilisa 55 kuya ku-80 lbs Amasentimitha angama-24
Owesifazane 45 kuya ku-70 lbs Amasentimitha angama-22
Ngokuvamile, futhi mhlawumbe kuyabiza, intengo yeGolden Retriever Husky Mix ingahle isuke ku- $ 250 iye ku- $ 1500 USD. Khumbula ukuthi lolu hlobo luvele muva nje ekuqaleni kwawo-2000, ngakho-ke iGolden Retriever Husky Mix Breeders kungahle kube yinkohliso ukuthola ukuphumula kakhulu futhi uthathe isikhathi sakho ekufuneni umfuyi omuhle. Ngenye indlela ungahlola Imidlwane YaseGoberian Yokutholwa .
Umuntu waseGoberian uhlala cishe iminyaka eyi-10 kuye kwengu-15. Inqobo nje uma uhlangabezana nokuzivocavoca kwemidlwane yakho, izidingo zokudla nezempilo lapho-ke i-pup yakho izobe ichuma iminyaka eminingi.
Umxube weGolden Retriever Husky nakanjani uzoba ngumphakathi! Le nja iyabathanda abantu nokunakwa. Uyaphuma, unesibindi futhi uyazethemba. Amagama amathathu okuchaza kahle lokhu abangela ukuthambekela komphakathi.
Fundisa umfundi wakho isimilo esifanele esemncane futhi baxhumana nabangane bakho nomndeni wakho ngendlela yezidladla ! Lolu hlobo futhi luhle nezingane ngenxa yobuntu bazo obusebenzayo nobudlalayo. Noma kunjalo, unake i-pup yakho nezingane ezincane njengoba zingacasulwa kalula.
Ngokuvamile, uhlobo lokuxuba lwe-Husky ingahle ibe namandla futhi ivikele abanikazi bayo. Kodwa-ke, ziwuhlobo olunobungane ngokweqile futhi azikulungele ukuba yinja yokuqapha. Bangabazalanisi abanothando olukhulu abazokugezela ngothando uma ubavumela.
Kubalulekile ukuthi kunikezwe isikhathi esiningi namandla ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zabo zamandla nokuqeqeshwa. IGoberian iyasebenza kakhulu futhi iyadlala futhi iyasithanda isenzo ngakho-ke kubalulekile ukuthi wena noma amalungu omndeni wakho nikwazi ukunikeza ingane yakho ukuzivocavoca njalo.
Lolu hlobo luthanda ukuzijabulisa, lubenze umlingani ophelele ebugebengwini banoma iluphi uhambo lokuhamba izintaba
Igceke elikhulu ngemuva lizokwenza izimangaliso ngalolu hlobo lwenja. Le nhlanganisela ayifanele ukuhlala emafulethini amancane futhi idinga isikhala esiningi ukushisa amandla futhi ukuze kungabikho ukuziphatha okulimazayo, njengokuhlafuna , kwenzeka.
Uma ungaqeqeshwanga kahle noma unikezwa ukukhuthazeka ngokwanele ngokwengqondo, lolu hlobo lungalimaza ngakho-ke kubalulekile ukuthi wakhe ubuhlobo obuhle nenja yakho ukuze gwema izindaba ezinjalo zokuziphatha .
Ukuba yohlobo olusebenzayo, oluphakathi nendawo kuya kosayizi omkhulu, le nja izodinga ukuhamba okuningi.
IGoberian yakho izodinga ukudla okunothe ngamaphrotheni asezingeni eliphakeme (cishe ama-20% wokudla kwabo kufanele kube amaprotheni) ngenxa yesimo sabo sokusebenza. Ngokwesilinganiso, i-pup yakho kufanele ithole izinkomishi ezimbili nengxenye kuya kwezintathu zekhwalithi ephezulu eyomile ngosuku.
Kunconywa ukuthi wondla i-Golden Retriever Husky mix yakho i-kibble esezingeni eliphakeme eqondene nohlobo olukhulu olusebenzayo. Lokhu kuzoqinisekisa ukuthi zonke izidingo zabo zomsoco ziyahlangatshezwa ngakho-ke bayaqhubeka nokusebenza, ukujabula nokuthuthuka.
Lolu hlobo ludinga cishe ama-calories ayi-1,500 ngosuku okufanele ondliwe kabili ngosuku. Kodwa-ke, lokhu kungahluka ekuphenduleni umehluko ngosayizi, ubude, umsebenzi nobumnene.
Lezi zinja zithanda isimo sezulu esipholile.
Ukungasebenzi nalolu hlobo lwezinja akuwona umqondo omuhle. Uma unentshisekelo kuPuppy yaseGoberian, bese ulungiselela ukuzilolonga!
Ngibonga umzali wabo onguHusky, odume ngamakhono abo okusika izihlibhi, ahlanganiswe nomzali wabo weGolden Retriever, owaziwa ngokuthola kabusha, lo mdlwane uzothanda noma yikuphi ukuzivocavoca umzimba; ukusebenza kusegazini labo .
Ukugijima okuhle, noma ukuhamba ngezinyawo, okungenani kabili ngosuku kungancamela lolu hlobo. Ukuzivocavoca umzimba ngeke kugcine ngokugcina ingane yakho ilungile kepha futhi kuzonciphisa nethuba lokucikeka okungafuneki okungaholela ekuziphatheni okulimazayo kulolu hlobo olusebenzayo.
Okungenani, nikeza ukuxuba kwakho nemizuzu engu-60 yokuzivocavoca ngosuku. Ungakhohlwa ukukushintsha lokhu nesikhathi sokuhamba, isikhathi sokugijima, nesikhathi sokudlala.
Qiniseka ukuthi awusebenzisi ngaphezulu lokhu kuxuba ngenkathi bekhula; kuze kube yiminyaka emibili ubudala uqiniseke ukuthi ulandela imihlahlandlela yokuhamba, kanjalo nawe , noma inja yakho ayilimazi.
IGoberian ikulungele nakanjani ukuphila okusebenzayo futhi yenza umlingani ophelele kunoma yimuphi umgijimi noma umgibeli wezintaba. Uma lokhu kungazwakali njengawe nakanjani cabanga ngohlobo olukhululeke kakhudlwana njenge Iphakethe .
Qiniseka ukuthi ugcina ukuzivocavoca kungaguquguquki, kodwa, qaphela ukuthi i-pup yakho ayidluli ukushisa! Zama ukuzipholisa ngesiphatho esiqabulayo ngemuva kohambo olude lwezinsuku zasehlobo.
Muhle kodwa unamahlathi amancane. Ukuqeqeshwa kubalulekile kulolu hlobo. Ngenxa yemvelo yabo eyi-Husky enobubi, qiniseka ukuthi uthatha isikhathi sakho ekunikezeni iGoberian yakho izikhathi ezifanele zokuqeqesha.
Umthetho ojwayelekile wesithupha wokuqeqeshwa kwe-canine ukusetshenziswa okuqhubekayo kokuqiniswa okuhle okubhanqiwe nesikhathi sakho nokubekezela. Lolu hlobo lungaba nenkani kancane ngakho-ke funa izeluleko ezifanele zokuqeqesha futhi ungesabi ukucela usizo kumqeqeshi wezinja oqeqeshiwe.
Izidingo Zokuhlaliswa Komphakathi & Ukukhuthazeka Kwengqondo
Ukuhlalisana kubaluleke kakhulu kuzo zonke izinhlobo zezinja futhi kufanele kuqale ngokushesha okukhulu.
Lokhu kunikeza i-pup yakho ukuxhumana okuhle phakathi kwabantu abasha, ezinye izinja, nezinye izilwane. Kunezindlela eziningi ezahlukahlukene onganikeza ngazo ingane yakho ngezidingo zenhlalo ezidingekayo ukuze ikhule ngempumelelo ibe yinja yabantu abazethembayo nabangaphumi:
Uhambo oluya ePaki Yezinja
Lapho inja yakho ihlangabezana nabantu abasha, imicimbi, izindawo nemisindo lapho kuthanda ukuba khona nokukhathazeka. Ngokuya ngezinye izilwane, qiniseka ukuthi uqala izingeniso usemncane. Qala izingeniso kancane futhi ugcine izikhathi njalo.
Ukuhlalisana nabantu kuyisihluthulelo sokuvuselelwa kwengqondo kwazo zonke izinja. Ukuvuselelwa kwengqondo kungahlangatshezwa ngezindlela eziningi, kepha, okuhle kakhulu yisikhathi sokudlala.
Isikhathi sokudlala silungele inja yakho ukwamukela umzimba nempilo yengqondo futhi ngokungangabazeki kunenzuzo ku-c ukuvuselela isibopho somuntu nenja .
Bangabantu abasebenza ngokuzithandela abathanda ukuthanda ukuthanda ukugijima, khumbula ifa labo lezinja eliyisigaxa, ngakho-ke, umdlalo osuselwe ekusebenzeni uphelele.
Ungadlala Kanjani Ukulanda Nenja yakho:
Thenga ibhola yenja enobungane yamazinyo
Phonsa ibhola bese uthi “landa”
Buka njengoba inja yakho igijimela ibhola
Ngiyethemba futhi uthandazele ukuthi inja yakho ibuyise ibhola!
Ukulanda kufaka ukukhuthazela kokugijima kanye nokubopha nokugxila.
Ukulanda ukufunda kungathatha isikhathi esithile kumfundi wakho ngakho ungamangali uma bengabuyisi ibhola ngokushesha kodwa ungakhathazeki, bazofunda ngokushesha.
Ukuqalwa kofuzo kuchazwa njengokukhula kwamathuba wesici esithile (esimweni seGolden Retriever Husky, isifo) ngenxa yezakhi zofuzo.
ICanine Hip Dysplasia (CHD) iyisici sezakhi zofuzo, esitholakala kuhlobo lweGolden Retriever kanye noHusky, ngakho-ke kushiya lokhu kuxubana kuhlaselwe yisifo esivimbela ukwakheka kahle kwamalunga we-hip. Lokhu kungadala ukukhubazeka nobuhlungu obukhulu.
UHusky ujwayele ukuba nezinkinga zamehlo ezifana nokwakheka kwamehlo. I-cataract 'ifiphaza ilensi yamehlo' ngakho-ke ingaholela ekuwohlokeni kombono ngokuhamba kwesikhathi. Lokhu kungashiya umdlwane wakho ubonakala edidekile futhi edidekile.
Ukuvakashelwa njalo koDokotela Wezilwane kubalulekile ukuze kungabikho nkinga yezempilo engatholakali futhi engabanjwa kusenesikhathi, ukuze ingathinti ikhwalithi yempilo yomntwana wakho.
IGolden Retriever Husky Mix iyinhlobo yezinja ehlaba umxhwele kakhulu. Banengubo ephindwe kabili (njengabazali babo) enoboya obude obuphakathi nobude. Ijazi linombala oqinile wegolide kepha linemibala ehlukene yegolide noma ngisho nemibala emnyama enombala omnyama (ofana nomzali wabo onguHusky). Umbala wengubo oqondile uzohluka ngenxa yezinga labo lokuxuba elihlanganisiwe.
Iningi lala midlwane linezindlebe ezithambile nezifloppy, zibukeka kakhulu njengomzali wabo obuyisayo futhi okuncane njengezindlebe ezicijile zikaHusky; kuyefana nangomsila wazo othambile.
Umzimba weGoberian ungowezemidlalo futhi unesibindi. Zingaba nesisindo noma yikuphi ukusuka kuma-lbs angama-45 kuye kwangama-80 lbs njengomuntu osekhule ngokugcwele, futhi zime cishe ngamasentimitha angama-22 kuye kwangama-24 ukuphakama okwenza kube uhlobo oluphakathi kuya kolukhulu.
Ngokuphikisana nenkolelo evamile, ijazi labo eliphindwe kabili alichiphi cishe njengabazali babo bakaHusky. Inhlanganisela yeGolden Retriever Husky ayiphezulu ohlwini lwezidingo zokuzilungisa. Iningi lokunakekelwa kwalolu hlobo oluxubene lutshaliwe kuzidingo zabo zokuqeqesha nezokuzivocavoca. Kodwa-ke, izidingo eziyisisekelo zokuzilungisa, ziyadingeka kuzo zonke izinja:
Ukuxubha nokuzilungisa kwamasonto onke
Ukuhlanzwa Kwamazinyo Masonto onke
Ukunqunywa Kwenzipho (uma kudingeka)
Ukuxubha njalo ingxube yakho yomklami kuzoqinisekisa ukuthi amajazi abo aphakathi naphakathi ubude ayacisha ukumata okungadingekile nokungcola . Ukugeza nokunquma izipikili ngendlela edingekayo.
Ukugwema ukuvakashelwa kwamazinyo ngokungadingekile kudokotela wezilwane, ukunakekelwa kwamazinyo nakho akufanele kunganakwa. Ukuxubha amazinyo kuyindlela engcono kakhulu yokunakekelwa kwamazinyo we-puppy. Kodwa-ke, lokhu kungaba nzima uma kungaziswanga kusenesikhathi, ngakho-ke mhlawumbe ungakhetha ukwelashwa kwamazinyo ngenkani esikhundleni.
Igalari yezithombe zaseGoberian
I-Goberian edlala endaweni ebandayo, lezi zinja zithanda isimo sezulu esipholile.
Ingabe ulungele izicathulo zakho zokugijima? Ingabe ungumndeni osebenzayo noma umuntu onegceke elilinganiselwe elilinganayo?
Uma ufuna inja enothando, ngubani ongaphindeka kabili njengomlingani ogijimayo noma wokuhamba izintaba, futhi uma unesikhathi nomzamo wokukhulisa inja yamandla amakhulu, khona-ke iGoberian iyinja okufanele uyicabangele. Ungahle ufune ukufunda nge ingane yakubo, uShepsky i-German Shepherd Husky Mix.
Umhlahlandlela Womnikazi KaJack Russell Chihuahua: Fun, Fast and Feisty!
Ukuhlanganiswa kweGolden Retriever Chihuahua: Enye yezinhlamvu ezihle kakhulu?
imidlwane yamalusi amnyama enezinwele ezinde emnyama
umdlwane wami womile uyenyuka
izindleko ezijwayelekile zenuzi yesiFulentshi